IKyrgyzstan Ithethelela Inkulelo Yonqulo YamaNgqina KaYehova
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
NOVEMBA 5, 2014
Umhla kaSeptemba 4, 2014, wazibalula kwiinzame zamaNgqina kaYehova zokufumana inkululeko yonqulo eKyrgyzstan. Kaloku ngolu suku, iBhunga loMgaqo-siseko leNkundla Ephakamileyo yaseKyrgyzstan lathethelela amaNgqina enkundleni kumthetho owamiselwayo ngenjongo yokuwacinezela. Nakubeni amaNgqina ebekade ejongwa njengenkonzo engekho semthethweni kule minyaka mine idlulileyo, isigwebo sathi angaqhubeka eshumayela yaye ehlanganisana ngokukhululekileyo kweli laseKyrgyzstan.
AmaNgqina kaYehova abhaliswa njengenkonzo esemthethweni ngo-1998 kweli laseKyrgyzstan ibe anqula ngokukhululekileyo. Kodwa ke, ekubeni kwawiswa umthetho owawuwacinezela ngo-2008, amapolisa aphazamisa aza agqogqa kwiintlanganiso zawo ngokuphindaphindiweyo kumzantsi weKyrgyzstan. Oku akwenza kuba esithi umsebenzi wamaNgqina awukho semthethweni ekubeni engabhaliswanga njengenkonzo. IKomiti Yeenkonzo yaye yasebenzisa amaqhinga ngeenzame zokuba amaNgqina angade abhaliswe. Kodwa ke isigwebo esawiswa ngoSeptemba 4 sayitshintsha yonke loo nto.
Ityala Eliye Lazibalula
Umthetho owamiselwa ngo-2008 uyakwalela ukuba “kubekho inkonzo okanye intlangano yonqulo” engabhaliswanga ngokusemthethweni. IKomiti Yeenkonzo yasebenzisa lo mthetho njengekroba lokuvala inkonzo yamaNgqina kaYehova kwiidolophu nezixeko zaseKyrgyzstan kuba isithi ayibhaliswanga. Lo mthetho ufuna ukuba kubekho uludwe lwabantu abayi-200 abaye bayiqala loo nkonzo olumele luthunyelwe kwamasipala ngaphambi kokuba luye kwiKomiti Yeenkonzo. Kodwa ke amaNgqina awakwazanga kuba isicelo sawo salityaziswa. Ekubeni amaNgqina ayengabhaliswanga, aba sesichengeni sokutshutshiswa. Ngenxa yezi meko amaNgqina abhenela kwiBhunga Lomgaqo-siseko.
Isigwebo seBhunga Lomgaqo-siseko sathi, “zonke iinkonzo ziyalingana phambi komthetho yaye akukho mntu okanye nkonzo emele iphakanyiswe ibe ngaphezu kwenye.” Eli bhunga lathi kwakungekho semthethweni ukulityaziswa kokubhaliswa kwamaNgqina yaye iKomiti Yeenkonzo yayizibhudil’ izingqi mayela nokusetyenziswa komthetho owamiselwa ngo-2008. Laphinda lathi inkululeko yonqulo ikwathetha ukuba inkonzo ingaqhuba naphi na apho ifuna ukuqhubela khona inkonzo lo gama nje ikubhalile oko ezincwadini zayo. Iincwadi zokusekwa kwenkonzo yamaNgqina kaYehova eKyrgyzstan zithi angayibambela naphi na inkonzo. Loo nto ithetha ukuba ngoku amaNgqina kaYehova akhululekile ukukhonza kulo lonke elo.
Isigwebo Esizisa Isiqabu
Isigwebo esawiswa ngoSeptemba 4 sazisa isiqabu kumaNgqina kaYehova akumzantsi weKyrgyzstan, ngokukodwa kuOksana Koriakina nomama wakhe uNadezhda Sergienko abahlala kwisixeko saseOsh. Bobabini babevalelwe endlini ngoMatshi 2013 ngezityholo zobuxoki ngoxa babeshumayela. Nakubeni yayicace gca into yokuba abamsulwa ngenxa yobungqina obubekwe phambi kwenkundla, uOksana noNadezhda bavalelwa ngelithi babe imali kwabanye oomakhulu abathathu.
Eli tyala lixoxelwe kwiNkundla Yesixeko saseOsh ngoSeptemba 2014 nango-Oktobha 7, 2014, yaye isigwebo siphume sisithi omabini la mabhinqa awanatyala yaye amele abuyekezwe ngale mpatho imbi ayifumeneyo. Le nkundla yavuma ukuba la mabhinqa ahlaselwa ngenxa yamarhe ayethe ndii okuba amaNgqina kaYehova aseOsh ayengekho semthethweni kuba engayibhalisanga inkonzo yawo. UOksana noNadezhda babethembele kwisigwebo esenziwa ngoSeptemba 4 liBhunga Lomgaqo-siseko, esaqinisekisa ukuba amaNgqina kaYehova aseOsh nalo lonke elaseKyrgyzstan asemthethweni.
UNadezhda Sergienko no-Oksana Koriakina
Iinzame Zokuxhasa Amalungelo Abantu
Ilizwe laseKyrgyzstan lazimanya neZizwe Ezimanyeneyo, ngoko lifanele libambelele kwizibhambathiso zokukhuthaza amalungelo abantu afana nenkululeko yonqulo, inkululeko yokuhlanganisana neyokuthetha. AmaNgqina alapha akhuselekile noko ngenxa yesigwebo esitsha esiwiswe liBhunga Lomgaqo-siseko leNkundla Ephakamileyo yaseKyrgyzstan. AmaNgqina kaYehova amalunga nayi-5 000 aseKyrgyzstan avuy’ ukufa ngoku kuba eyifumana inkululeko yawo yonqulo, yaye anoxabiso ngeenkundla eziye zanceda ekuphumezeni oku.